'साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार' संवाद; छाइल | साहित्यपोस्ट
बजारको लोभ र पुस्तक लेखाइ मेरा लागि फरक कुरा हुन् - लोकराज भट्ट
साहित्यपोस्ट	 प्रकाशित १९ जेष्ठ २०७९ १९:०१
यहाँ उत्कृष्ट एघारमा छनोट भएको उपन्यास ‘छाइल’का स्रष्टा लोकराज भट्टसँगको संवाद प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईँको पहिलो कृति “साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार”का लागि उत्कृष्ट पुस्तकको सूचीमा पर्न सफल पर्यो । कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ ?
खुसी छु । साहित्यपोस्टले नयाँ लेखकका लागि गरेको यो पवित्र कर्म हो । पुरस्कारका लागि पुस्तक छनोट भैसकेपछि छाइलमाथि पाठकले गरेका प्रतिक्रिया मलाई खुसी बनाउनलाई मात्र गरेको हैनन् जस्तो लागेको छ । म उत्साहित छु ।
“साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार”का लागि ११ कृति छनोट भएका छन् । अर्थात् तपाईँका प्रतिस्पर्धीका रूपमा बलिया कृतिहरू छन् । तपाईँले पुरस्कार जित्नु वा नजित्नुले तपाईँको साहित्यिक यात्रामा के अर्थ राख्छ ?
पुरस्कार जित्नु र पुस्तक लेख्नु फरक कुरा हुन् । पुरस्कारका लागि विभिन्न मापदण्डहरू होलान् । त्यो प्रावधिक पाटो हुन सक्छ । सबै लेखक र कृतिप्रति मेरो उत्तिकै सम्मान छ । जसले जिते पनि म त खुसी छु । लेखन कर्ममा रमाउन प्रयास गरिरहेको बेला एउटा उर्जा थपिएको छ । यो एक अवसर पनि हो । म त अवसरहरूमा पनि आफ्ना कम्जोरीहरू खोज्ने मान्छे हुँ । अझै जिम्मेवार भएर लेख्नुपर्छ लागेको छ ।
“छाइल” किन लेख्नु भयो ? कृति लेखनका अनुभूति र प्रकाशनका बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न !
मैले सुदूरपश्चिकै कथा लेख्नु थियो । जति न्याय मैले सुदूरपश्चिम लेख्दा गर्न सक्छु, अरू परिवेश लेख्दा मबाट अहिले नै अन्याय पो हुन सक्छ कि लाग्यो । अब पनि लेखिएन भने हाम्रो सभ्यता कसरी पुस्तान्तर हुन्छ ? हाम्रो माटोको कथा कसले लेखिदिन्छ ? हाम्रो भाषा कहाँ गएर बिलय हुने हो ? यी सोचनीय कुराहरू थिए । तब मैले “छाइल”मार्फत सुदूरपश्चिमको भाषा, संस्कृति, सभ्यता, त्यो जीवनशैली र ती भुइँमान्छेका कथाहरू लेख्ने कोसिस गरेँ ।
पुस्तक प्रकाशनको पाटो मेरा लागि निकै सुखद् रह्यो । पुस्तक प्रकाशनका बेला जति उत्साह ममा थियो, बुक्स हिमालयले त्योभन्दा बढी उत्साह देखायो । मैले सुनेको छु, लेखकहरूले प्रकाशनका चरण धेरै सास्तीहरू भोग्छन् । तर यी कुराहरू सम्झिँदा लाग्छ प्रकाशनको मामलामा “छाइल” भाग्यमानी पुस्तक हो । मेरो पहिलो कृति नै प्रकाशकले निकै महत्त्वका साथ छाप्नु भयो । प्रकाशन गृहले एउटा कृति र कृतिकारका लागि गर्नु पर्ने कुनै कसुर बाँकी राखेन । मैले प्रकाशनको अवधिमा हाम्रो सम्पूर्ण टिमबाट धेरै राम्रो सहयोग प्राप्त गरेको छु ।
पहिलो कृतिमा डोटेली सभ्यताको कथा, त्यो पनि उपन्यासमा – उपन्यासको बजारले लोभ्याएको हो ?
मैले जुन विषयमाथि कथा तयार गरेँ, त्यसबाट खुसी हुन सकिनँ भने लेख्नुको अर्थ रहँदैन । त्यसपछि त्यो पाठकका लागि पनि खास हुँदैन होला । नेपाली साहित्यमा पूर्वी नेपालको संस्कृति र सम्बन्धलगायतका कुराहरू धेरै लेखिएका छन् । दार्जीलिङ्, सिक्किम र आसामसम्मका लेखकहरू र त्यो परिबेश नेपाली साहित्यमा छ । तर सुदूरपश्चिमले सधैँभरि काठमाण्डौलाई पनि नैपाल भनेर चिन्नुपर्यो । आफ्नै देश पनि परदेशजस्तो भयो ।
डोटेली भाषा अर्थात खस भाषालाई नेपाली भाषाको उद्गम भनिन्छ । तर उक्त भाषाले नेपाली साहित्यमा पकड जमाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । अझै पनि कयौँ कठिनाइ छन् । तसर्थ मैले यी कुराहरूलाई थोरै भए पनि उपन्यासमार्फत प्रवेश गराउन सकिएलाकी भन्ने लाग्थ्यो । डोटेली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, नेपाली साहित्यका पाठकसमक्ष पुगोस् भन्ने हेतुले पनि यो पुस्तकले यो रूप निर्धारण गरको हो । पुस्तक लेखिसकेपछि पाठकहरूले मन पराइदिउन भन्ने अपेक्षा त हुन्छ । बजारको लोभ र पुस्तक लेखाइ मेरा लागि फरक कुरा हुन् ।
“छाइल”ले पुरस्कार पायो भने आर्थिक राशिले के गर्नु हुन्छ होला ?
यो त सोचेकै छैन । पाइयो भने सोचौँला ।
भविष्यको बाटो कतिबेला कहाँ मोडिन्छ थाहा हुँदैन । परिस्थिति खराब भएन भने केही न कही त लेखिएला । तर यो नै लेख्छु भनेर योजना भने बनाएको छैन । र, नलेखी पनि म बस्न सक्ने मान्छे हैन ।
लोकराज भट्टसाहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार
कविताः नोट अफ डिसेन्ट